7-da barnaamij ee ugu wanaagsan ee kombiyuutarka loogu talagalay Android | Androidsis
Haaruun Rivas | 07/07/2021 14:00 | Codsiyada Android, Aaladaha Android
Had iyo jeer way wanaagsan tahay in lagaa helo goob kasta, gaar ahaan haddii aad ka baxsan tahay magaalada oo aad ka fogaato nooc kasta oo ilbaxnimo ah. Waxa jira aalado inaga caawinaya in aynu jahaysanno, jaantusyada ayaa ka mid ah. Kuwani waxay muujinayaan qodobbada aasaasiga ah, kuwaas oo ah woqooyi, koonfur, bari iyo galbeed. Kuwaas ayagoo adeegsanaya, waxaan ku ogaan karnaa halka qodob cayiman ku yaalo, iyo sidoo kale meesha loo socdo ama waxa la sameeyo hadii nalaga lumo
Taasi waa sababta markan aan u taxno qaar ka mid ah 7-da barnaamij ee ugu fiican kombiyuutarka in aad maanta ka heli karto Google Play Store ee taleefannada casriga ah ee Android.
Halkan waxaan ku soo bandhigeynaa taxane ah barnaamijyada kombiyuutarka ugu fiican ee taleefannada Android. Waxaa habboon in mar labaad la adkeeyo, sida aan had iyo jeer yeelno, taas Dhammaan barnaamijyada aad ka heli doontid boostadan uruurinta waa bilaash. Sidaa darteed, uma baahnid inaad foorjirto wax lacag ah si aad u hesho mid ama dhammaantood.
Si kastaba ha noqotee, hal ama in ka badan ayaa laga yaabaa inay leeyihiin nidaam lacag-bixin gudaha ah, oo u oggolaanaya helitaanka waxyaabo badan oo dhexdooda ah, iyo sidoo kale shaqooyin horumarsan iyo astaamo qiimo leh. Sidoo kale, looma baahna in wax lacag ah la bixiyo, waxaa mudan in lagu celiyo. Hadda haa, aan u nimaadno.
1 Just jiheeyaha (lacag la'aan ah oo xayeysiis ah lahayn)
2 Kombuyuutar Dijital ah
3 Steel Compass (Xayeysiis la'aan)
5 Compass Maps: Jahaysan Compass
6 Compass iyo khariidad
7 Tools GPS - All in xirmo mid GPS
Just jiheeyaha (lacag la'aan ah oo xayeysiis ah lahayn)
Xayeysiinta iyo xayeysiintu waa waxyaabaha ugu dhibka badan ee aad jirtid, waan ognahay. Tani waa wax ku badan ficil ahaan dhammaan barnaamijyada iyo cayaaraha bilaashka ah ee ka jira Play Store iyo, guud ahaan, waa inaad bixisaa si aad uga takhalusto kuwan, ama iyada oo loo marayo barnaamijka kala duwan iyo qaar ka mid ah nidaamka lacag-bixinta gudaha ama iibsashada barnaamijka intaadan rakibin.
Nasiib wanaag, Kaliya Compass waa codsi naga badbaadiya waxaas oo dhan, adigoon haysan nooc kasta oo xayeysiis ah iyo fulinta wixii ay ballanqaaday: inuu noqdo jiheeyaha shaqeynaya, iyada oo aan dheeraad ahayn, sida ay ku tusayso magaceeda.
Qalabkan tilmaame waxay ku tusaysaa magnetic iyo juqraafi ahaan waqooyiga by maglin declination, laakiin intaas kaliya maahan. Waxay leedahay hawlaha dhowr ah sida qorrax ka soo baxa iyo qorrax dhaca, mid ka mid ah oo aad ku ogaan karaa markii markii labadan dhacdooyinka ka dhaca maalintii.
Waxay kaloo xisaabisaa joogga ka sarreeya heerka badda halka aad hadda joogto, adoo adeegsanaya qaabka EGM96 (geoid), oo ku tusaya xoogga aagga birlabta, iyo waxyaabo kale. Isla mar ahaantaana, waxay leedahay interface si sahlan loo arki karo iskuduwayaasheedana waxaa lagu soo bandhigi karaa DMS, DMM, DD ama UTM. Waa barnaamij heer sare ah oo loo adeegsado socodka, dalxiiska iyo howlaha sida kaamamaynta iyo socodka; marna ma ogaan doontid goorta aad lumin karto.
Kombuyuutar Dijital ah
codsi kale oo u wareegtaan aad u wanaagsan waa, shaki la'aan, tan kalena. Waxay ku timaaddaa waxaad u baahan tahay, kumbuyuutar kumbuyuutar ah oo leh interface fudud oo la fahmi karo. Waxay sidoo kale muujineysaa darajooyinka, iyo sidoo kale joogga iyo loolka meelaha iyo tilmaamahooda.
Tan kale waa taas Waxay la imaaneysaa khariidad aad kala bixi karto si aad si sax ah naftaada ugu hesho, meel kastoo aad joogto. Intaas waxaa sii dheer, waa mid sax ah, maadaama had iyo jeer lagu qiyaaso 100; Haddii kale, waxaad gacanta ku cabbiri kartaa dhowr ilbiriqsi gudahood. Ha lumin meel kasta oo aad tagtid!
In kasta oo barnaamijkani yahay mid fudud, haddana sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan Play Store. Aan waxba hore u leedahay in ka badan 10 milyan oo downloads, a mudan 4.5 xiddiga rating iyo in ka badan 170 kun oo comments wanaagsan. Dhanka kale, waa mid ka mid ah kuwa ugu fudud: wuxuu culeyskiisu yahay 5 MB waxbadanna ma badna, marka ficil ahaan ma cunayo meel xusuusta gudaha ah.
Steel Compass (Xayeysiis la'aan)
Codsigan sidoo kale wuxuu leeyahay horudhac ah inuusan bixin nooc kasta oo xayeysiis iyo xayeysiis ah, taas oo ka dhigaysa mid aad ugu raaxeysan in la isticmaalo, labadaba iyo iyada oo aan lahayn khadka internetka.
Ayaa la socda compass fudud oo la fahmi karo oo loo habeyn karo sida aad jeceshahay, oo leh mawduucyo iyo midabbo kala duwan oo ka dhigaya in isticmaalkiisu uusan keli ahayn. Si kastaba ha noqotee, sheyga ma aha oo kaliya bilicsanaanta. Barnaamijkani wuxuu kaloo bixiyaa shaqooyin badan oo hagitaan iyo goob ah.
Kuwa bilawga ah, marka lagu daro bixinta jajab sida ay noqonayso, barnaamijkani wuxuu bixiyaa laba qaab oo loo yaqaan 'compass' oo laga kala xusho, kuwaas oo ah qaab run ah (oo ku saleysan woqooyi run ah) iyo qaab magnet ah (oo ku saleysan woqooyiga magnetic). Ka sokow, waxay kaa caawineysaa inaad ogaato mowqifka qorraxda iyo dayaxa, iyo sidoo kale bilowga iyo waqtiyada loo dejiyey labada iyo tan kale.
Waa mid aad wax ku ool ah oo tan ugu fiican ay tahay inaysan ururin ama soo dejisan nooc kasta oo xog iyo macluumaad ah, sidaa darteed uma baahna mid ka mid ah ballaadhinta isku xirka Internetka, iyada oo loo marayo Wi-Fi ama xogta, illaa Android-kaaga mobile ku xiran yahay.
Developer: Si fududWerx
Ikhtiyaar kale oo wanaagsan oo loogu talagalay soo dejinta iyo rakibidda barnaamijka jajabku waa kan, kaas oo, marka lagu daro bixinta waxa kombiyuutar wanaagsan uu bixiyo, wuxuu la yimaadaa heer xumbo la dhisay, kaas oo aad ku cabiri karto xaglo qaraabo ah adiga oo moobiilka dusha ka saaraya oo aad la jaanqaadi karto si la mid ah. Si kale haddii loo dhigo, heerka xumbada waxaad awoodi doontaa inaad ogaato sida ay wax u toosan yihiin iyo in kale, waa ikhtiyaar sidoo kale si ballaaran loogu adeegsado dhismaha iyo cabirrada.
Codsiga Tani waa mid ka mid ah fudud, sida ay leedahay fudud a iyo interface functional. Xaqiiqdii, waxaan ku ogaan karnaa tan kaliya markaan eegno culeyskiisa, oo si dhib yar uga badan 2 MB. Waxa kale ayaa ah inay tahay aalad aan lahayn nooc xayeysiin ah, iyadoo waliba ka mid ah kuwa ugu macquulsan uguna raaxo badan in la isticmaalo. Waxaa intaas dheer in this, waxa uu leeyahay sumcad wanaagsan ah 4.3 xiddigood Play Store, taas oo ah sababta aannu waxaa ka mid ah in post isku duwidda xogta this ka mid ah baraheeda ugu wanaagsan ee casriga ah Android.
Developer: R. Barnaamijyada
Compass Maps: Jahaysan Compass
Tani waa mid kale oo ka mid ah barnaamijyada ugu dhammaystiran uguna wanaagsan ee loogu talagalay Android. Sida kuwii hore, qalabkani wuxuu siiyaa dhamaan aasaaska ay tahay inuu jiheeye kasta oo wanaagsan uu bixiyo, sida xisaabinta saxda ah ee jihada ee ku saleysan qodobada kadinal iyo inbadan.
Ma aha oo kaliya in aad awood u yeelan doonaan in aad naftaada u heshaan at hal dhibic waana og tihiin meeshaan xagga woqooyi, koonfur, bari iyo galbeed jira, laakiin sidoo kale xogta boos kale sida joogga, loolka, gacan iyo geeska. Intaa waxaa dheer, waxay muujineysaa meesha aad hadda ku sugan tahay ee khariidadaha waxayna kuu oggolaaneysaa inaad ballaadhiso khariidadaha ama aad la wadaagto goobtaada shabakadaha bulshada sida Facebook, tusaale ahaan.
Barnaamijkan wuxuu si fudud ugu xirmi karaa khariidadaha Google si loo bixiyo khibrad fudud, oo leh khariidado sida hydrib, dayax gacmeed, dhul iyo waxyaabo kale oo badan. Waxay kaloo kuu ogolaaneysaa inaad xisaabiso ku cabirka aagga dhulka khariidadaha habka ugu fudud, Kaliya by codsanaya seddex dhibcood meel ama dhul, iyo ogayn wixii xannibaad waa on meelaha kala duwan.
Developer: Hal App Team
Compass iyo khariidad
Hadda waxaan la soconnaa barnaamij kale oo kombuyuutar ah oo aan kaliya bixinaynin waxqabadka jajabnaanta, laakiin sidoo kale leh khariidado kaa caawinaya inaad naftaada hesho, meel kasta oo aad joogto. Oo waa in app this kuu oggolaanayaa inaad iskaa dhig mar kasta maabka, iyo mar dambe ma aad leedahay si aad wax kale samayn; jiheeyaha ayaa si otomaatig ah u cusbooneysiin doona xaaladdaada hadda iyo jihadaada. Ka sokow, qalabkani wuxuu kaloo xisaabin karaa gacan iyo geeska.
Dhinaca kale, Compass iyo map kuu ogolaanayaa inaad si ay u wadaagaan meesha aad iyada oo shabakadaha bulshada in xoogaa ilbiriqsiyo ah, si asxaabtaada, saaxiibbadaada, asxaabtaada iyo ehelkaaguba u ogaadaan halkaad joogto. Waxa kale oo aad leedahay laba nooc oo baraheeda codsigan: digital iyo map, taas oo ah mid ka mid ah in waxa uu ku yaalaa on top of mid ka mid ah iyo qaab xogta sida sare iyo loolka.
Isla mar ahaantaana, Waxay diiwaangelineysaa xog kale sida xawaaraha sare, Longitude, Xaaladda Dareenka, heerka jiifka, Jiirada wareega iyo waxyaabo kale oo badan. Hawlaha kala duwan waxaa lagama maarmaan ah in GPS la hawlgeliyo. Waxaa jira shaqooyin badan in tani ay dalabyo qalab iyo sida wax yar oo miisaan, taas oo kaliya oo ku saabsan 8 MB ee Store Google Play.
Developer: Hal Barnaamij oo Software ah
Tools GPS - All in xirmo mid GPS
Si loo dhammeeyo qoraalkan uruurinta ee ugu wanaagsan sideeda jajab ee hadda ka jira dukaanka Google ee loogu talagalay Android, waxaan kuu soo bandhigeynaa Qalabka GPS - Dhammaan xirmada GPS, codsi kale oo aad u wanaagsan iyo mid ka mid ah noocyadiisa ugu dhameystiran sidoo kale, Haa runtii .
Barnaamijkan ma aha oo kaliya inay bixiso adeegsiga jiheeyaha; waxaa ku jira wax badan oo ka mid ah hawlaha ku salaysan GPSSidaa darteed, waxaan kaa rajeyneynaa, waxaad u baahan tahay qadka internetka si aad uga faa'iideysato dhammaan meelaynta iyo astaamaha dhul-dhisidda.
Marka lagu daro ku hagida adiga oo ku saleynaya qodobada aasaasiga ah (woqooyi, koonfur, bari iyo galbeed), waxaa ku jira aag, aare, xawaare, waqtiga GPS, khariidadaha socodka, altimitir, cimilada, cadaadiska jawiga iyo waxyaabo kale oo badan. Waxay sidoo kale kuu ogolaaneysaa inaad si fudud ula wadaagto goobtaada oo aad u aragto tirakoobka howlaha sida socodka iyo socodka. Waxay leedahay wax ka badan 5 milyan oo soo degsasho ah iyo qiimeyn xiddig 4.6 ah.
Qalabka GPS ™ - Dhammaan hal xirmo GPS ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » 7-da barnaamij ee ugu wanaagsan ee kombiyuutarka loogu talagalay Android
Barnaamijyada uurka ee ugu fiican si loo xakameeyo geeddi-socodka oo dhan